China Gym Sports Long Sleeve Women T-Shirt PY-CT002 fanamboarana sy orinasa | Pinyang
gym spaoro lava tanana vehivavy
Ahoana no misafidy T-shirt fanaovana fanatanjahan-tena?
1. Lava sy manify
T-shirt fanaovana fanatanjahan-tena V-neck dia hamela rivotra misimisy kokoa amin'ny vatana manontolo, ny lesoka manify amin'ny tombony ary mazava kokoa. Ankehitriny ny hatsaran-tarehy mampihena be rehetra, ity hatsaran-tarehy ity avelao ho hitan'ny rehetra, aza misafidy kinova T-shirt malemy, dia hiseho ho mahia izy io.
Ny T-shirt misy T-shirt mifamatotra akaiky misy tendany boribory no mety indrindra amin'ity karazana vatana ity. Ity vozona boribory ity dia hiseho ho mahia kokoa, ary ny "altitude" ankapobeny dia nivelatra be. Aza mieritreritra hoe kely ianao, tokony hitafy akanjo mafy, ary hihemotra izany. Ny fomba tsara indrindra hiakanjoana dia ny fiakanjoana.
Ny T-shirt fanaovana fanatanjahan-tena tsotra sy malalaka tsy misy fehikibo dia mety amin'ny endrik'ireo bandy matavy. Zava-dehibe indrindra ny manamarina ny antsipirian'ny vozona rehefa mifidy ny mety amin'ny T-shirt fanaovana fanatanjahan-tena. Ny fisafidianana tendany lehibe kokoa dia mety hanamora ny hatoka. Ny T-shirt V-vozona kely dia tsy mety, ary ny tendany V lehibe dia tsara kokoa. V mahatakatra ny mahatonga ny bandy matavy ho be volo.
Safidio amin'ny ankapobeny ny volon-tsoroka, tsotra sy malala-tanana, lamaody sy mahomby, mety ho an'ny olona na iza na iza.
Fampiasana vokatra: ho an'ny doka fanaovana dokam-barotra, akanjon'ny vondrona, fanaingoana manokana, sns., Dia afaka manamboatra loko, lamina, sary famantarana.
1.Q: Inona ny fomba fandefasana?
A: Amin'ny fomba mazava. Toy ny fedex, dhl, tnt sns. amin'ny rivotra, amin'ny ranomasina. Ny vidin'ny fandefasana dia manapa-kevitra amin'ny alàlan'ny fomba fandefasana sy ny lanjan'ny vokatra ary ny habetsany ary ny adiresinao amin'ny antsipiriany.
2.Q: Inona ny fomba fandoavam-bola?
A: Manohana ny fomba fandoavam-bola isan-karazany izahay (T / T, karatra Visa, Western union, Moneygram, fandoavam-bola azo antoka-Escrow, sns) T / T
3.Q: Azonay atao ve ny manonta ny marika na logo anay manokana amin'ny vokatrao?
A: Eny, fifalianay ny maha-mpanamboatra OEM anao any Shina mba hahafeno ny fepetra takin'ny OEM.
4.Q: Fa maninona ny entana sasany no tsy mitovy amin'ny sarin'ny tranokala sy ny zavatra azo ampiharina?
A: Satria ny fahasamihafana eo amin'ny jiro sy ny fitetezana, ny andiany samy hafa ihany koa, ny materialy dia mety tsy dia misy fahasamihafana firy. fanontaniana, azafady mba lazao anay alohan'ny filaminana ary manontania mazava.
5.Q: Politika miverina sy miverina
1.Ny fanekena sy famerenam-bola ihany no ekenay ho an'ny olan'ny kalitao, toy ny fanapahana, lavaka, tsy misy fanimbana nataon'olombelona taorian'ny fampiasana azy.
2.Pls mifandraisa aminay amin'ny sary ao anatin'ny 3 andro aorian'ny nahazoanao ny baiko raha misy fahasimbana.
3.Pls manamafy fa ny reture itmes dia amin'ny fonosana tany am-boalohany, marika / maria, tsy misy hosasana ary tsy misy maloto.
4.Ny famerenam-bola dia atao raha tsy misy ny fanoloana. Fa noho ny vidin'ny fandefasana entana averina, ny tompon'andraikitra no tompon'andraikitra amin'izany.
5. Hiatrika ny olanao izahay ao anatin'ny 3 andro aorian'ny andefasanao ny hafatra
Previous: Akanjo Diagonal lamaody T-Shirt lava tanany vehivavy PY-CT004
Manaraka: T-Shirt Long Plain Cotton PY-CT001
Volavolan-diagonaly lamaody lava volo lava T-Sh ...